Faah faahin Wafuud ka socota Qaramada Midoobay oo Muqdisho Booqday (Sawiro) – SBC
Faah faahin Wafuud ka socota Qaramada Midoobay oo Muqdisho Booqday (Sawiro)
Ka dib markii ay dalka Soo caga dhigteen Wafdiga ka Socda qaramada Midoobay ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho xarunta dalka ayaa waxaa ay u dhaqaaqeen kulamo ay la qaadanayaan madaxda sar sare ee dowlada KMG ah ee Soomaaliya.
Ambasidor Augostuine Mahiga ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaalaya ayaa hor kacayay wafdigani waxaana ugu horeyn uu kulan la qaatay Raiisul wasaraha Cusub ee Dowlada KMG ah ee Soomaaliya C/weli Maxamed Cali Gaas.
Kulanka Dhexmaray Raiisul wasaare Gaas iyo Mahiga ayaa ahaa kulan looga wada hadlay arimo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen arimaha ku wajahan xukuumadiisa, heerarka kala duwan ee xaalada Dalka iyo weliba arimo kale .
Raiisul wasaaraha ayaa kulan saxaafadeed uu qabtay ka dib kulanka uu la yeeshay wafdigaasi waxa uu ku sheegay in arimihii ay ka wada hadleen Mahiga ay dhamaan noqdeen kuwo siweyn la iskugu afgarto.
Kadib waxaa dhacay Kulamo kale oo uu Danjire Mahiga la kala qaatay madaxweynaha dowlada kMG ah ee Soomaaliya Shariif Sh Axmed iyo Gudoomiyaha Baarlamanka Shariif Xasan Sh Aadan.
Arimaha kulamadaas looga wada hadlay ayaa waxay u badnaayeen qaab u socodka xukuumada muwada halka sano ah ee loogu daray iyo arimahii soo wajahay, isagoo Ambsdor mahiga uga mahadceliyay Baarlamanka Soomaaliya sidii ay u ansixiyeen Raiisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabay iyo Wadahadalkii Kampala.
Dhinaca kale waxaa isla maanta magaalada Muqdisho soo gaaray Wafdi uu horkacayo Isku dumaridaha Qaramada Midoobay arimaha Bin aadan nimada Mark Bowden, kaas oo ka dib markii uu ka soo degay Garoonka diyaaradaha Muqdisho kulamo la qaatay gudiga Abaaraha ee Qaranka isagoona kala hadlaya rimo badan.
Ujeedada wafdiga ayaa aheyd sidii kormeer loogu sameyn lahaa xaalada dalka iyo dhibaantooyinka bin aadan nimo ee ka jira magaalada Muqdisho .
waxa uu Booqasho ku tagay wafdigan goobo dhowr ah oo ay ku sugan yihiin dad soo barakacay oo ay xaalad qalafsan ku heysato gudaha Magaalada Muqdisho.
Marka laga yimaado Wafuuda Qaramada midoobay ee Maanta soo booqatay Muqdisho aya waxaa hadana jiray Dhaq dhaqaaqyo ay dowlada kMG ah ee Soomaaliya maanta ka sameysay caawinta dadka Barakacayaasha ah ee ku dhaqan Muqdisho.
Dowlada ayaa Deegaano ay ka mid yihiin Dharkiinley iyo kuwo kale ka sameysay cuno qeybin iyo teendho qeybin iyadoo sidookale dib u dejin uga sameysay qoysas aad u farabadan isla deegaanka Dhankiley.
C/risaaq Sh Ibraahim sheekeeye